Imithombo yeendaba zasekuhlaleni | Martech Zone
Andiqinisekanga ngexabiso lokwenyani lokujonga ubume bendawo ngamajelo eendaba ezentlalo xa ukungena nokuhluka kwezi ndawo zosasazo loluntu kuxhaphake kakhulu. Inyani yile yokuba unokufumana iipokotho zamathemba okanye iipundits zeshishini kuzo zonke. Ndicinga ukuba kunomdla ukubona ukuba kukho izinto ezithile kubalo lwabantu olusekwe eqongeni, nangona kunjalo.
Kwilizwe eligqibeleleyo, uphawu lwakho luya kudala ubukho kuyo yonke inethiwekhi yoluntu ekhoyo kwaye uqhubele phambili ngokwahlulahlula nganye nganye. Kuxhomekeka kwizibonelelo zakho, ezingenakho ukwenzeka, ke khetha iinethiwekhi zakho ngobulumko, kwaye uzenze ngobuninzi bazo wakube ulapho. UMichael Patterson, uHlumelo loLuntu
Isuka e Imithombo yeendaba yezeNtlalontle yokwazisa ngeSicwangciso esiliQili soHlulo:
I-58% yabantu abadala basebenzisa i-Facebook. Idemografi ye-Facebook inokufumaneka kuLwazi lwabo lwaBaphulaphuli.
Iipesenti ezingama-23 zabantu abadala basebenzisa i-LinkedIn. Idatha ye-LinkedIn inokufumaneka kwifayile ye- Ikhasi leendaba le-LinkedIn.
I-22% yabantu abadala basebenzisa iPinterest. Amanani abantu bePinterest anokufunyanwa kwifayile ye- IZiko loPhando lwePew labemi beziQonga zeNethiwekhi yeNtanethi.
I-21% yabantu abadala basebenzisa i-Instagram. Idemografi ye-Instagram inokufumaneka kwi IZiko loPhando lwePew labemi beziQonga zeNethiwekhi yeNtanethi.
I-19% yabantu abadala basebenzisa i-Twitter. Ukusetyenziswa kwe-Twitter kunye nolwazi lwedemokhrasi lunokufumaneka kwi- Ikhasi leNkampani ye-Twitter.
Sikwabandakanya okutsha Imithombo yeendaba yeNtlalontle ividiyo evela UErik Qualman, umbhali weSocialnomics.
tags: U-Erik Qualmannubuntu be-facebookUGoogle kunye nedemografiIinkcukacha zabantu abadibeneyoonline kwi-intanethipinterest amanani abantuiqongaUbume babantuUbume bendawo snapchatImidiya yokuncokolakwimidiya yoluntu kwimithombo yolwaziamanani eendaba ezentlaloInguquko kwimithombo yeendaba kwezentlaloamanani abantu kwi-twitter
Kukho ixabiso leToni ye-B2B kwi-Social Media
Umbuso weNtengiso yezeNtlalontle ngo-2015